Sakafo 5 mandoro ho azy ny tavy
Ny “sandwich” tena mety atao sakafo atoandro
Na ny fotoana hihinanana sakafo atoandro aza dia tsy misy, na tsy ampy, ho an’ny olona be asa, hany ka lasa mirona any amin’ny mofo sesika,
Ireo sakafo mahasalama raha ampiarahana
Misy karazan-tsakafo izay mora raisin’ny vatana kokoa ny otrikaina entiny raha ampivadiana amin’ny sakafo hafa manokana. Ireto misy karazan-tsakafo azo hampivadiana tsara
Episy karana, mahasoa ny voan’ny diabeta
Matetika dia ny sakafo tsy azo hohanina foana no voaresaka ho an’ny trangana diabeta. Misy sakafo tena mahasoa ho an’ireo olona voan’ity aretina ity anefa. Anisan’izany ny zava-maitso manitra sy episy sasantsasany.
Vao maraina dia vizana, inona no tokony hohanina?
Raha vao mifoha avy natory dia mahatsiaro tena ho vizana dia fantaro fa mila hery izay ny vatana. Azo alaina avy amin’ny sakafo izany. Ireto avy ny tsara ho fantatra
Ny sakafo feno ilain’ny vatana isan’andro
Efa re ombieny ombieny fa mila sakafo voalanjalanja, miovaova ny vatana mba ho salama. Toy ny ahoana tokoa anefa no handrafetana azy ? inona avy no ilaina ? atoronay anao :
Inona tsara no atao hoe : sakafo « BIO »
Malaza ny vokatra « BIO ». Ny sakafo bio mantsy no voalaza fa mahasalama ahafahana misoroka ny homamiadana sy aretina maro. Vidiana lafo mihitsy izany any am-pitan-dranomasina.
Ny sakafo tokony hohanina aorian’ny sakafom-pety
Satria hifanesy ny fety dia ho betsaka ny sakafo matsiro. Sady hanakorontana no hamizana ny ny taova fandevonan-kanina anefa izy ireny raha mitohitohy lavareny. Ilaina ny mandamina kely ny sakafo eny anelanelam-potoana noho izany.
Tsy misy fahagagana ny fampihenan-tena fa izay sakafo miditra ny vava ihany no mivoaka eny amin’ny vatana.
Misy karazana sakafo mora mitahiry tavy toy ny maionezy, ny saosisy, ny kiendiendy sy ny sakafo matavy. Misy koa anefa ireo mitroka tavy ka anisan’ireny ireto tanisaina anao manaraka ireto.
Mitroka menaka be ny baranjely rehefa handrahoana. Fantaro fa mitroka menaka koa izy rehefa tafiditra ao anaty. Kely kaloria izy kanefa be fibres sy pectine ankoatra izay ary mandoro tavy sady mahavoky ela no manala ny poizina ao anaty ary tsy mampitohina mihitsy. Tsy andrahoina amin’ny menaka kosa anefa izy rehefa hahandro azy .
Legioma kely kaloria ny selery. Mahavoky koa izy satria be fibres. Be vitamina rahateo izy sady mampivalan-drano koa fa tsy vitan’ny mitroka tavy fotsiny.
Mampivalan-drano ny brocoli, ny poavrao ka manadio ny ao anaty. Ny korzety indray dia mandany hery betsaka ny mandevina azy. Be fibres sady manamora ny fandevonan-kanina kosa ny laisoa sady manadio ny ao anaty. Sady mandoro tavy avokoa ireo voatanisa ireo.
Sady be « fibres », kely kaloria kanefa be ranony ny mananasy. Tsy vitan’ny mitroka tavy izy fa miady amin’ny cellulite izay vokatry ny fiandronan’ny rano ao anaty koa. Tsy tokony hohanina irery anefa izy sao dia hankarary vavony indray.
Na dia matavy aza ny trondro matavy dia mitroka tavy koa. Ny oméga-3 mantsy dia mahery vaika tokoa amin’ny fitrohana ny tavy miandrona ao anaty. manampy ny hozatra ho voatazona tsara ny proteina ao anatiny.
Azo hohanina matetika noho izany ireo voatanisa ireo raha toa ka te-hanena tena. Kendreo fotsiny ny fomba fikarakarna na fandrahoana azy ireo tsy ho be menaka loatra indray. Tandremana tsara koa ny fatran’ny sira ampiasaina aminy.